Finland oo soo saartay Sharciyo Adag oo dhanka Bulshada Ah ( Akhriso Xanibaadaha Cusub) Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka FinlandFinland oo soo saartay Sharciyo Adag oo dhanka Bulshada Ah ( Akhriso Xanibaadaha Cusub)
March 9, 2021 Wararka Finland, Wararka Maanta Somaliska 0
Photo: Antti Aimo / Koivisto Lehtikuva via AP
Finland ayaa soo bandhigtay xanibaado cusub oo looga hortagayo cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’ si loo xakameeyo faafitaanka cudurka . Isniintii, Golaha Shacbiga ayaa go’aansaday in la xiro inta badan makhaayadaha iyo goobaha laga cabo kafeyga.
Xiritaanka makhaayadaha ayaa marka hore la adeegsan doonaa illaa iyo 28-ka Maarso.
Waxaa sidoo kale istaagi doona ciyaaraha iyo goobaha ay ku ciyaaraan carruurta da’doodu ka weyn tahay laba iyo toban jirka iyo shuruudaha barashada dhijitaalka ah ee ardayda dhigata dugsiga sare.
Laga bilaabo Isniinta, jimicsiyada iyo hoolalka isboortiga sidoo kale waa inay xiraan albaabadooda.
Sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins, Finland waxay sifiican ula tacaashay faafida Corona, iyada oo diiwaan galisay in kabadan 62,000 kiis oo coronavirus ah iyo dhimashada 767.
Laakiin infekshanku waa sii faafayaa muddooyinkan dambe, kor u kaca wuxuu ku xiran yahay noocyada fayraska ee is beddelay.